October 2019 – 9han News
Exposure to sunlight can...
A father who wants to ed...
SPA stores open in the c...
Researchers say that get...
A father who wants to educate his children
Father was the first hero of all. Some fathers look harsh, but they are not. When it comes to family matters, it stands firm and protected. If the
SPA stores open in the compound of the office where the nine martyrs fell
A spa shop opens in the compound of the compound where the nine martyrs fell Yangon October 26 (messenger) A spa shop was opened in the secretary’s office,
Researchers say that gettingagood night’s rest can be long
Sometimes, it may be hard to justify the long days off in bed, but this piece of research will give youareason to think that sleeping longer
တစ်ချိန်တုန်းကစည်းလုံးစွာရှိခဲ့တဲ့ ကိုးရီးယားနိုင်ငံ နှစ်ပိုင်းကွဲသွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ကိုးရီးယားနိုင်ငံဟာ ဆိုဗီယက် နဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတို့ရဲ့ အားပြိုင်ပွဲ စစ်အေးတိုက်ပွဲမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ထိခိုက်ခဲ့ရပြီးနောက် နှစ်ပိုင်းကွဲသွားခဲ့တာ နှစ် ရ၀ လောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပိုင်းကွဲမသွားခင်က ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်ဟာ တစ်ခုတည်းသော စည်းလုံးတဲ့ ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ပြီး မင်းအဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရုရှား-ဂျပန်စစ်ပွဲအပြီး ငါးနှစ်အကြာမှာ ဂျပန်က ကိုးရီးယားကို သိမ်းယူလိုက်ပြီးနောက် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ နှစ်ပိုင်းမကွဲသွားခင်အထိ
နတ္သမီးမ်က္ႏွာေလးနဲ႔ နတ္ဆိုးခႏၶာကိုယ္ရွိေနတဲ့ ဆရာ၀န္မေလး
ကိတ္တယ္ဆိုတာ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေတာ့ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ထားတယ္မသိဘူး။ ကၽြန္တာ္ကေတာ့ ဒီလိုမိန္းကေလးမ်ိဳးကိုမွ ကိတ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္တာဗ်။ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ေတာင္ သူ႕လိုခႏၶာကိုယ္မ်ိဳးျဖစ္ႏုိ္င္ဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ကူတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဒီတရုတ္မေလးကေတာ့ အမိုက္စားခႏၶာကိုယ္နဲ႔ IG မွာ နာမည္ႀကီးေနခဲ့ပါတယ္။ သူမနာမည္ကေတာ့ Yuan Herong ပါ။ Asia One မွာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ Yuan Herong ဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အင္တာနက္ဆယ္လီတစ္ေယာက္ပါတဲ့။
ႏွ လုံးေသြးေၾကာ က်ဥ္းသူမ်ားအ တြက္ မခြဲရ ဘဲေပ်ာက္တဲ့ သဘာဝေဆး
ပ ရိသတ္ႀကီးတို႔ေရ …က်ေနာ္တို႔ရဲ့ မီဒီယာစာမ်က္ႏွာေလးက ပရိသတ္ႀကီးတို႔ အတြက္ ဗဟုသုတ သတင္းစုံကို တင္ဆက္ေပးေန႐ုံသာမက ပရိတ္သတ္ႀကီးတို႔ရဲ့ က်န္းမာေရးကိုပါ တန္ဖိုးထားတာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေဆးနည္းအေၾကာင္းေလးေတြကိုပါ ရွာေဖြတင္ဆက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္ေနာ္… အခု ျပန္လည္မၽွေဝေပးခ်င္တာကေတာ့ ႐ုတ္တရက္ေသဆုံးသြားနိုင္တဲ့ ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါအတြက္ ေဆးနည္းေလး တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္…. ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါဆိုတာကေတာ့ ႏွလုံးေသြးေၾကာအတြင္း အဆီခဲမ်ားစုပုံလာတာေၾကာင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းၿပီးေတာ့ ႏွလုံးေသြးေၾကာအတြင္း ေသြးစီးဆင္းမႈေလ်ာ့နည္းျခင္း ဒါမွမဟုတ္
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ဒုတိယမြောက် ဖန်ပြွန်သန္ဓေသား အောင်မြင်စွာ မွေးဖွား
(Unicode) ရန်ကုန် ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးတွင် ဒုတိယမြောက် ဖန်ပြွန်သန္ဓေသား အောင်မြင်စွာ မွေးဖွား ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး(ရန်ကုန်)၌ ၅ ပေါင် ၂ အောင်စ ရှိ ဒုတိယမြောက်ဖန်ပြွန်သန္ဓေသား မိန်းကလေးတစ်ဦးကို ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဒေါ်ခင်လတ် ဦးဆောင်သော ခွဲစိတ် ဆရာဝန်ကြီးများက ယနေ့နံနက် ၈ နာရီ ၃၆ မိနစ်တွင် အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်မွေးဖွားပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မိဘတွေစွန့်ပစ်ခဲ့လိုက်လို့ မသန်စွမ်းညီငယ်လေးကိုထိန်းကျောင်းရင်း ကျောင်းတက်နေရတဲ့ ၁၁ နှစ်အရွယ်ကောင်လေး
၁၁ နှစ်ကလေးအများစုမှာတော့ အပူပင်မရှိ ကျောင်းတက်နိုင် ၊ သူငယ်ချင်းတွေပျော်ပျော်ရွှ င်ရွှင် ဆော့ကစားနိုင်ကြပါတယ်။ ဒီကလေးလေးကတော့ သူရဲ့ မသန်စွမ်းဖြစ်နေတဲ့ ၄ နှစ်သား အရွယ် ညီငယ်လေးကို ချီပိုးရင်း ကျောင်းတက်နေရတာပါ။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ဆော့ကစားနေတာကို ငေးမောကြည့်နေယုံကလွဲပြီး သူ့မသန်စွမ်းညီင ယ်ေ လးကို ဂရုတစိုက် ပြုစုနေရလို့ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်မကစားနိုင်ရှာပါဘူး။ ၁၁ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးအမည်ကတော့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခရိုင် ပြည်မြို့ ပြည်သာယာ တိုးချဲ့2တာရိုးဘေး ပြည်သာယာရပ်ကွက်တွင်အောက်တိုဘာ (၂၅)ရက်နေ့ နံနက်(၆)နာရီ (၃၀)တွင်အမျိုးသမီးအလောင်းတစ် လောင်းတွေ့ရှိကြောင်းသတင်းရသည်။ အဆိုပါအမျိုးသမီးအလောင်း၏ လက်နှင့်လည်ပင်တွင်ကြိုးချည် ထားသည့်အတိုင်းတွေ့ရပြီး ဦးခေါင်းနှဖူးတွင်းဒဏ်ရာများရရှိထား ကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး ခေတ္တရာလူငယ်များသာရေးနာရေးအသင်းမှ ရင်ကွဲရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း ကနဦးသိရှိရသည်။ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့အသေးစိတ်ဆက်လက်စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်းနှင့်သတင်းအပြည့်အစုံအားဆက်လက် ဖော်ပြပေးမည်။
ရည္စားဆိုသူက LCCI သင္တန္းခန္းမထဲဝင္ေရာက္ကာ ဓားျဖင့္ထိုး၍ မိန္းကေလးတဦး ေသဆံုး
မႏၲေလး၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ကၪၶနမဟီရပ္ကြက္ ၇၈လမ္းႏွွင့္ ၃၄လမ္းေထာင့္ Sky Wall shopping mall (၃)လႊာရွိ LCCI စာရင္းကိုင္သင္တန္းတြင္ ေအာက္တိုဘာ(၂၃)ရက္ ညေန(၆)နာရီခြဲက သင္တန္းတက္ေနေသာသင္တန္းသူ(၁)ဦးမွာ ဓားထိုးခံရၿပီးေသ‌ဆုံးခဲ့ရရွာသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ LCCI စာရင္းကိုင္သင္တန္းမွ သင္တန္းသူ မေအးမြန္သန႔္အား ၎၏ရည္စားဆိုသူ ေမာင္လတ္ေအာင္(ခ)ေအာင္ေအာင္မွ အ႐ိုးအသြား(၁၀)လက္မခန႔္ရွ္ိ စတီးဓားျဖင့္ထိုးရာ မေအးမြန္သန႔္၏ ဝဲဘက္ရင္အုံထိုးသြင္းဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္၊ ဝဲရင္ၫြန႔္ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္၊ ယာဝမ္းဗိုက္ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့သျဖင့္
Exposure to sunlight can cause these effects
© 2019 9han News.